Ukujongwa koMlambo kumbindi weDolophu - I-Airbnb
Ukujongwa koMlambo kumbindi weDolophu
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguDerek
Eli khaya lihle losapho ngo-1960s kukuhambo olufutshane lwemizuzu emihlanu ukusuka kwiivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela, iipaki kunye neendawo zokuthenga. Thatha uhambo lwangokuhlwa unqumle eyona bhulorho inqunyayo inde eOstreliya kwaye ujonge izibane ezintle zasebusuku. Okanye, jonga nje imibala emihle ebonisa uMlambo i-Avon kwenye yeepati ezimbini zangaphambili ngelixa usonwabela ikomityi eshushu.
Ngamagumbi okulala amathathu, eli khaya lingalala ukuya kutsho kwiindwendwe ezisixhenxe. Kukho iibhedi ezimbini eziphindwe kabini kunye neebhedi ezintathu zomntu omnye. Igumbi ngalinye lokulala line fan yeenyawo kunye ne-radiator ekhoyo. Kukho ikhabhathi eninzi kunye nendawo yokuxhoma iimpahla kumagumbi okulala amabini aphambili.
Ikhitshi libandakanya izixhobo zemihla ngemihla kunye nomatshini wekofu kunye neoveni enkulu yombane. Iti, ikofu kunye netshokolethi eshushu zinikiwe, kunye nebhaskithi eyamkelekileyo yokwamkela ukuba uzonwabele ngelixa ujonge kuMlambo iAvon.
Igumbi lokuhlambela liya kukubuyisela ngexesha kunye noyilo lwayo lwe-retro. Zizipholele kwibhafu eluhlaza emnandi kwaye uthande umzobo opeyintwe kwishawari yesikrini. Iitawuli, amalaphu okuhlamba, ukuhlamba umzimba, ishampu kunye ne-conditioner zonke zibonelelwe.
Igumbi lokuhlala elipholileyo libonelela ngomjikelo ongasemva we-A / C kunye nendawo yomlilo yombane. Kukho ukhetho olubanzi lweeDVD zokuzonwabisa kwi-smart TV, kunye nemidlalo eyahlukeneyo yebhodi yokudlala kunye nosapho.
Indawo enkulu yokuhlamba impahla ibandakanya umatshini wokuhlamba olayishwayo ophezulu onokufikelela kwiyadi ebanzi engasemva kunye neline yempahla. Kukho ibhodi yokuayina neayini kwikhabhathi yokuhlamba iimpahla, kunye nomgubo wokuvasa kunye nesisusa amabala.
Ngaba ufuna ukwenza umsebenzi othile ngelixa ulapha? Sikuphathele. Yiza nelaptop yakho kwaye uyibeke kwidesika yomsebenzi. Ungaphinda uvale iingcango zekonsathi ukuba ufuna loo nto yabucala eyongezelelweyo.
Ifumaneka kumlambo iAvon, eli khaya kukuhambo olufutshane ukuya embindini wedolophu. Kukho amabala okudlala kunye neepaki ezikufutshane, kunye nendawo ebiyelweyo ye-swan yedolophu. Eyona bhulorho ide inqunyanyisiwe eOstreliya yi-50m kuphela ezantsi kwendlela kwaye unokuzibona izibane ezintle zasebusuku ezisuka kumabala angaphambili. Thatha ezinye izinto ezilahliweyo ngapha kwendlela kwaye wondle amadada asekuhlaleni kunye neentaka ukusuka elunxwemeni lomlambo okanye uhambe kakuhle ujikeleze umlambo ngokwawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Derek
I am an easy going Australian with a young family who loves meeting new people and seeing new places.
Whether it be hosting or travelling I look forward to developing relationships with other Airbnb hosts/guests.
Imibuzo iyafumaneka ngeetekisi kunye neefowuni ngeakhawunti yethu yakwa-Airbnb. Sithanda ukunika iindwendwe indawo yazo, kodwa sihlala sikuvuyela ukunxulumana kunye nokudibana nabantu abatsha abavela kwihlabathi liphela.